Nezvedu - Shandong Fuda Shanduko Co, Ltd.
Shandong Fuda Shanduri CO., LTD
Inovhara nzvimbo yefekitori
9300 mativi emamita
Dzakakomberedza mazana matatu
13700 mativi emamita
Shandong Fuda Transformer Co, Ltd. ibhizimusi rinotungamira mukugadzira, kuvandudza uye kutengesa kweakaomesesa-mhando maTransformer, magetsi anoshandura, mafuta-akanyudzwa maTransformer, amorphous alloy transformers, 10kV maTransformer, 35kV maTransformer, bhokisi maTransformer uye anotsigira zvigadzirwa. kambani iri muLiaocheng guta.Pano chinzvimbo chenzvimbo chakakwirira, ine nhoroondo refu tsika, iyo Beijing-Hangzhou canal, iyo Ji Han yekumhanyisa nzira, iyo Beijing-Kowloon njanji mune ino nzira, traffic iri nyore kwazvo.
Iyo kambani yakavambwa muna 2000, mushure memakore gumi ekuyedza uye kusimudzira, rave rakakura nzvimbo bhizinesi mudunhu. Iyo kambani inovhara nzvimbo ye13700 mativi emamita, nhema nzvimbo iri 9300 mativi emamirimita, .Iyo kambani yakaisa dhizaini, R&D pakati, kugadzira, kutengesa uye manejimendi sechikwata chinokwanisa, vashandi varipo vane vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nenomwe, mainjiniya 3 vanhu, mainjiniya vanhu makumi maviri nenomwe, vanhu vanopfuura makumi mairi nemakumi mairi vakawana rezinesi rechikoro chesekondari. Kubva 2000 kusvika 2004, kambani yatenga maseti anopfuura gumi nematanhatu emidziyo yekugadzira yekugadzira magetsi, pamwe nemidziyo yekuyedza.
Ndivanaani isu tiri-Boka
Zvitifiketi & kukudzwa
Kubvira payakagadzwa, kambani iyi yanga ichishandisa manejimendi yazvino uye huwandu hwehutongi hwekutonga. Iyo kambani yakabudirira kupfuura iyo ISO9001 / 2000 yemhando yepamusoro sisitimu yekuongorora iyo yakaongororwa neMody kambani munaNdira 2010; Muna Chivabvu 2008, kambani yakawana iyo 3C certification iyo yakaongororwa neChina Quality Certification Center.MunaGunyana 2010, zvigadzirwa zvekambani zvakapasa bvunzo yemhando yeNational Transformer Quality Supervision uye Inspection Center. Iyo yakakwana michina yekambani uye yekugadzira tekinoroji, kuomesa kuyedza nzira, yakasimba tekinoroji simba, sainzi uye yakaoma dhizaini dhizaini, simbisa kupa vatengi kugona, hwakavimbika mhando, yepamusoro mashandiro emagetsi zvigadzirwa.
ISO9001 / 2000 yemhando yepamusoro manejimendi system odhita